कांग्रेस आमसभाका ‘सेलिब्रेटी’ वक्ता, चौधरीले बढाउलान् भोट ?
काठमाडौं ८ मंसिर– नुवाकोटको देवीघाटमा मंसिर ७ गते बिहीवार आयोजित कांग्रेसको चुनावी सभामा आकर्षक थिए, उद्यमी विनोद चौधरी । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासंगै कांग्रेस उम्मेदवार अर्जुन नंसिह केसीको चुनाव प्रचार गर्न नुवाकोट गएका चौधरीसँग ‘सेल्फी’ खिच्न युवाहरुको घुइचो लाग्यो ।
प्रख्यात नायक÷कलाकार जस्तै चौधरीलाई युवाहरुले सेल्फी खिच्न घेरे । कार्यक्रममा कलाकारको उपस्थिती रहेपनि युवाको ध्यान चौधरीले नै आकर्षण गरे । नेताका सनातनी भाषणलाई माथ गर्ने भाषण चौधरीले गरे ।
सभामा संक्षिप्त भाषण गरेर चौधरी अर्को सभाका लागि हिडिहाले । भाषणका क्रममा चौधरीले आशन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेमा पाँच बर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धि चीनको सरह हुने दावी गरे ।
चुनावी सभाहरुमा गएर चौधरीले आशन्न निर्वाचनमा पनि कांग्रेस बहुमतसहित पहिलो पार्टी हुने दावी गरिरहेका छन् । यसबीचमा चौधरीले नवरपरासी, गोरखा, ओखलढुङगा, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लाका चुनावी सभालाई सम्वोध गरिसकेका छन् ।
नेकपा एमाले र माओवादीबीचको वामपन्थी गठबन्धनपछि झस्किएको कांग्रेसका लागि विनोद चौधरी ‘सञ्जिवनी बुटी’ बनेका छन् । ‘विनोद चौधरीलाई सभामा ल्याएर बोल्न लगायँदा युवाहरुको विश्वास जित्न सकिन्छ भनेर बालाइएको हो’ कांग्रेसका एक जिल्ला नेताले लोकान्तरसँग भने ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा सीमित रहेको समयमा चौधरीलाई देशका विभिन्न भागमा आयोजित सभाहरुमा भाषण गर्न भ्याइ नभ्याइ छ । प्राय कांग्रेस महामन्त्री डा शशांक कोइरालासंग हेलिकप्टरमा हिड्ने चौधरी सभाहरुमा पुग्छन् र छोटो मन्तव्य सकेर हिडिहाल्छन् ।
मंसिर २ गते गोरखाको पालुङटारमा गएर चौधरीले नयाँ शक्तिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईलाई भोट मागे । उनले त्यहाँ आर्थिक समृद्धिको कुरा गरे । सभाको अन्त्यमा बोलेका डा बाबुराम भट्टराइले चौधरीको नाम लिएर पालुङटारमा उद्योग, कल कार्खाना खोल्न सकिने कुरा गरे ।
नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ मधेसीको सूचीमा एक नम्बरमा राखेर सांसद बनाउने आश्वासन दिएको छ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा नेकपा एमालेबाट सांसद बनेका चौधरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
विश्वका धनाड्यको सूचीमा नेपालबाट परेका अर्बपति चौधरी व्यापारलाई साथमा लिएर राजनीतिमा होमिने संकेत गरेका छन् । नाफाको केही हिस्सा सामाजिक कार्यमा खर्चदै आएको बताउने चौधरी पूर्णकालिन रुपमा राजनीतिमा लाग्ने सोचका साथ कांग्रेस प्रवेश गरेको उनका निकटस्थहरु बताउछन् ।
‘नेपाली कांग्रेस हरेक युवाको अनुहारमा विनोद चौधरी देख्छ । यहाँ बनेका बाटो र पुल नुवाकोटका जनतालाई काठमाडौं बसाइ सर्न सुलभ होस भनेर बनाइएको होइन, हरेक व्यक्तिलाई विनोद चौधरी जस्तै सफल उद्यमी बनाउनको लागि हो’ कांग्रेस नेता थापाले बिहीवारको सभामा भने ।
लामो समय सत्तामा रहँदा समेत देशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि केही काम नगरेको भन्ने वामपन्थी गठबन्धनको आरोप चिर्न कांग्रेसले प्रतिष्ठित व्यबसायी चौधरीलाई अगाडी सारेको छ । चौधरीलाई साथमा लिदा देशभरका उद्योगी व्यासायीलाई कांग्रेसप्रति आकर्षित गर्न सकिने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
गृहमन्त्रीलाई भेटेर उत्तर कोरियाली राजदूतले भने – हाम्रा नगरिकलाई भिसा प्रक्रिया सहज बनाइदिनपर्‍यो
बिहीवार दिनभर भक्तपर डुब्दा अनिदोमै बित्यो रात !
गंगामायाले तोडिन् अनशन, माग पूरा नभए १० दिनपछि फेरि बस्ने
भक्तपुरमा राहत वितरण गर्न नेकपाद्वारा आह्वान
डा. केसीका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ
इङ्ल्यान्डका ह्यारी केनले जिते गोल्डेन बुट काठमाडौं–रसियामा आइतबार सम्पनन विश्वकप फुटबलमा इङल्यान्डका ह्यारी केनले गोल्डेन बुट जितेका छन् । उनले प्रतियोगिता अवधिभर ६ गोल गरे । केनले समुह चरणको सुरुवाती खेलमा ट्युन...
क्रोएशियाले फर्कायो बराबरी गोल
फ्रान्सले हान्यो गोल
क्रोएशिया र फ्रान्सबीचको भिडन्त जारी
- डा. निरञ्जन अर्याल पूरा पढ्नुहोस
June 24, 2018, 10:41 a.m. मित्रता नवीकरणको नवीनतम् प्रयास पूरा पढ्नुहोस